KENYA ooo qorshe xasaasi ah ka wadda' JUBALAND - Caasimada Online
Home Warar KENYA ooo qorshe xasaasi ah ka wadda’ JUBALAND
Beledxaawo (Caasimada Online) – Korneyl Aadan Axmed Xirsi (Aadan Rufle) oo ka tirsan Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ee Gobolka Gedo ayaa sheegay in uu socdo qorshe ay dowlado shisheeye, oo ay Kenya ugu horeyso ku kala qaybinayaan deegaanada Jubaland, waxna looga bedelayo dastuurka Dowlad Goboleedka Jubaland.
Korneyl Aadan Axmed Xirsi ayaa tilmaamay in dowladahan ay Madaxweynaha Jubaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) kala shaqeynayaan, sidii uu xafiiska ku sii jooggi lahaa, shanta sano ee soo socota, sida uu yiri.
Aadan Rufle oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri “Ayadoo Axmed Madoobe aanu sifo sharci ah ku joogin xafiiska baa waxaa socda wax ka bedel hadda lagu sameynayo Dastuurka Jubbaland, meeshii Madaxweynaha uu xukunka ka hayn lahaa afar sano, sida uu Dastuurku dhigayo in la rabo in lagu bedelo ama lagu qoro shan sano. Saddexda gobol ee Jubbaland baa waxaa la rabaa in lagu soo koobo laba gobol iyo bar, sida Gobolada Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo Gobolka Gedo oo bar laga goosanayo.”
Waxa kale oo uu yiri “Macnaha waxa socdo waxaa weeye marka Dastuurka Jubbaland la bedelo in Kenya ay Axmed Madoobe siiso shan sano oo kale oo xafiiska uu ku sii joogayo, oo ka bilaabanaysa wixii ka dambeeya bisha 1aad (January) ee sanadka 2022.”
“Maadaama Kenya looga adkaaday kiiskii dacwadda badda waxaan ka digeynaa in labada gobol iyo barka ee lagu soo koobayo Jubbaland la hoos geeyo Kenya, ayadoo lagu saleynayo xuduuddii uu Ingiriiska kala dhex dhigay Gobolada Jubbaland iyo NFD, si lamid ah xuduuddii uu Ingiriiska ka sameeyay Reserve Area. Meesha hadda xuduudda la keenayna waxay badda u jirtaa 540km, ujeedka ugu weyna waa in dalka Soomaaliyeed lagu boobo,” ayuu yiri Rufle.